Raclette anounganidza zvokudya uye kufambidzana nemhuri uye neshamwari
Raclette anounganidza zvokudya uye kusununguka
Vakawanda vanoziva uye vanochida - raclette
Raclette, chikafu chiri padhipu inopisa kana dombo rinopisa nemapati akabatanidzwa ave sangano rakakurumbira rakawira kwemakore mazhinji. Raclette haasi wekodzero yemutambo chete, asiwo wekunakidza kwemanheru emhuri, kwemanheru neshamwari, paEva Idzva Idzva kana kwekuzvarwa uye dzimwe nguva dzakawanda, kudya pamwe neketani inopisa mukati metafura inozivikanwa.
Raclette - zvokudya zvinonaka uye zvinokosha
Asi chii chinoita kuti rudzi urwu rwekugadzirira kudya ruve rwakakurumbira? Raclette anogona kudyiwa pamwe chete masikati uye manheru. Izvo zvakakodzera chaizvo kutonhora mumvura asiwo muzhizha mubindu, pamatanda kana padharclette ravhara rinogona kupedzwa. Runako pano ndiko kushamwaridzana uye unoziva, munhu wese anofara.
Idya pamwechete pamwe chete
Kugadzirira raclettes kwakanyanya nyore, nokuti kuumbwa kwechokwadi kunoitwa ne "kudya" chete patafura. Mumwe nomumwe raclette eater anotora zvokudya zvake, zvaanoda kuisa raclette kana kuisa mumapango.
Raclette zvakare kune vanodyara
Zvingava zvipembenene, zvinomera, nyama, hove kana masikisi anodya, pano munhu wose anowana zvokudya zvaanoda. Zvose zvinogoneka panguva yekugadzirira zvakare. Zvichida imwe inodonha zvokudya zvakada kunenge zvagara zvatariswa pans kana "mukiki wezvokudya" inodzvora zvokudya zvaanoda iye oga.
Mumapango zvakanakisisa zvinhu zvose zvinonaka, ingava gorosi, bhakoni, anonisi, mushonga, shrimp, asparagus, miriwo, zviduku zvenyama kana soseji, garlic - urongwa hunogona kupfuurirwa nekusingaperi. Kazhinji, zvinoshandiswa zvakabikwa muhomwe ne raclette cheese, asi kungopisa uye kusabikwa kunogoneka.
Chinhu chikuru pamusoro pemhando iyi yekugadzirira ishamwari. Hapana munhu anongogara patafura pasina shoko uye anodya. Nokuda kwekugadzirirwa zvakananga patafura kune mikana yakawanda uye nguva yekutaura, izvo zvinoita kuti raclette ive yakakurumbira zvikuru mumakambani makuru kana mumhuri.
Hapana mimwe mitemo yakaoma mukugadzirira asi panewo zvimwe zvinhu zvinofanira kuonekwa mu raclette. Raclette zvinoreva kugadzirira patafura, izvo - zvinoshandiswa hazvifaniri kuva nenguva yakareba kana kubika nguva.
Mukuwedzera, chikafu chacho hachifaniri kupa mvura yakawandisa kana kudikanwa mafuta kugadzirira. Muchiitiko ichi, zvinokurudzirwa kuti utange kubika kana kubika chikafu uye chete kupisa raclette.
Kunyange zvazvo munhu wose akagara pasi patafura patafura, izvo zvakagadzirwa zvekudya zvisikwa kumusoro kweplate kana mupani. Ichi chikafu chinonakidza kwemakore ose. Kufananidza zvakasiyana-siyana masukisi, saladi, dips kana mamwe maitiro.
Raclette haisi kunhuhwirira zvinonaka chete, inoparadzirawo ushamwari. Iko vasingazivi vasingazivi kana kuti vasati vauya nemafungiro aya - iyi yekubika haisi yakakodzera chete yekugadzirira kwekudya kukuru uye kudya kwakanaka kunogona kugadzirirwa neimba iyi yezvigadzirwa zveimba.
Garai pamwe chete mudye pamwechete
Somuenzaniso, maonde ane uchi nekisiki chesi anogona kugadzirirwa, kana kuti Nutella inogona kupiswa nebhanana. Kufungidzira hakuna muganhu wekudya nenzira iyi.
Kana iwe usingadi nguva dzose Raclette cheese, unogonawo kugadzira pani dzayo neGauda, ​​Edammer kana Mozarella, saka pano, zvakare, hapana mhedziso kune mafungiro ako.
Chimwe chitsva chakasiyana che raclette chigadziriswa chine fungidziro yakagadzirwa
Pakati pe raclette tsvina inogadzirwa. Zvimwe zviripo uye mikana iri pano zvakare yakakura. Kugadzirwa kwe raclette kakatova kakakura kudarika asi kufarirwa kwacho hakuregi, uye kwete pasina chikonzero.
Hakuna imwe nzvimbo inogona kunge yakasiyana-siyana inogona kunge yakabatanidzwa uye yakabatana yakagadzika patafura imwe uye ichidya muhukama hwakanaka uye, sezvakataurwa kare, varaidzo haina kukwana. Pano haisi chete inodyiwa, asi kambani yakanakidzwa chaizvo.
Mbatatari Saladi Recipes | Zvokudya nekumwa
Kunwa tei zvinoreva kuchena
Kudya - kunwa kunokosha kana uchirasikirwa
Inwa kofi nemapisules eNespresso
Tequila - Inwa | | drink